यस विश्वकपका ६ रोचक रेकर्ड, बन्ला त ५०० रन? – Everest Dainik – News from Nepal
यस विश्वकपका ६ रोचक रेकर्ड, बन्ला त ५०० रन?
काठमाडौँ, जेठ २८ । आइसीसी विश्वकप २०१९ विधिवत रूपमा सुरु भएको १२ दिन भइसकेको छ । यस दौरानमा विश्वकपका निर्धारित ४५ मध्ये १५ खेलहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा एक तिहाई विश्वकप सम्पन्न भइसकेको छ।
यस विश्वकपमा बनाइएका पिचहरूमा ठुलो स्कोर बन्ने विश्वास गरिएको थियो । आइसीसीले नै दर्शकहरूलाई दिइने स्कोरशीटहरूलाई ५०० रनको आधारमा तयार पार्न लगाएको थियो । खासमा आइसीसीले यसपाली कुनै न कुनै टीमले ५०० रन बनाउने अनुमान गरेको थियो । तर हालसम्मका खेलहरूको विश्लेषण गर्दा भने यसो देखिएको छैन ।
सुरुमा अधिकांश टीमहरूले प्रति ओभर १० रनको औसतमा रन बनाउन सक्ने अनुमांग अरिएको भएपनि औसतमा अझै यो आँकडा ६ रन प्रति ओभरभन्दा माथि जान सकेको छैन । सुरुका १० खेलपछि गरिएको विश्लेषणमा जारी विश्वकपमा औसत रनरेट ५.७० रहेको पाइएको छ । हुन त योई आजसम्मकै सर्वाधिक औसत विश्वकप रनरेट हो । सं २०१५ को विश्वकपमा यो औसत ५.६३ थियो ।
आजसम्मका खेलहरूबाट छ रोचक तथ्य यस विश्वकपको बारेमा खुल्न आएका छन्:
१. थोरै रनअन्तरले जीत : यस पटक तुलनात्मक रूपमा थोरै अन्तरले हार जीत भइरहेको छ । पहिले ब्याटिङ गर्ने टीमले आजसम्म भएका मध्ये ७ खेलमा जीत हात पारेका छन् । त्यसमध्ये ३ वटा खेलमा जीतको अन्तर २१ रन भन्दा बढी रहेको छ ।
त्यस्तै पछि ब्याटिङ गर्ने टीमले जितेका खेल जम्मा ६ खेलमा जीत हात पारेका छन् त्यसमध्ये सबै भन्दा सानो अन्तर २ विकेटको रहेको छ । यसरी हेर्दा जारी विश्वकपमा सानो अन्तरको जीतहार हुने देखिएको छ ।
हालसम्म दुई खेल भने वर्षाका कारण रद्द भएका छन् ।
२. आजसम्मकै सर्वाधिक रनरेट: यस विश्वकपमा सबै टीमले बनाएको कुल रनको हिसाब गर्ने हो भने त्यो औसत हालसम्मकै सर्वाधिक ठुलो विश्वकप औसत हो । २०१५ मा यो औसत ५.६३ थियो ।
३. बाउंड्रीमा क्याच गर्न जोडबल: यस विश्वकपमा फिल्डरहरूको संघर्ष पनि प्रशंसायोग्य रहेको छ । यसमा थुप्रै खेलाडीहरूले बाउन्ड्रीमा नै क्याच लिएका छन् । यसमा बेन स्टोक्सले दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको क्याच, शेल्डन कटरेलको अस्ट्रेलियाविरुद्ध आदि क्याचहरू महत्वपूर्ण छन् । विश्वकपमा सामेल टीमहरूले यस प्रकारको क्याचलाई महत्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा विकास गर्ने देखिन्छ । सामेल तीम्हारूले यसप्रकारको क्याचको अभ्यास समेत गर्न थालेको बुझिएको छ ।
४. पहिले ब्याटिङ गर्नु खतरापूर्ण: अहिलेसम्म खेलिएका खेलहरूमा ७ पटक पहिले ब्याटिङ गर्ने टोली अलआउट भएको छ भने पछि ब्याटिङ गर्ने टीम ३ चोटी मात्र अलआउट भएको छ ।
५. शर्ट पिच बल: यस विश्वकपमा फास्ट बलरहरूले ४५ प्रतिशत शर्ट पिच बल दिएका छन् । यो आफैंमा एउटा नयाँ रेकर्ड हो । अधिकांश बलरले ८ मिटरभित्र नै बलिङ गर्ने कोशिस गरिरहेको पाइएको छ ।
६. औसत बलिङ गति १३२ किमी: विश्वकपमा सामेल सबै १० टीमका फास्ट बलरहरूको बलिङ स्पीडको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले औसत १३२ किमी प्रतिघन्टा बलिङ गरिरहेका छन् । यो पछिल्ला तीन विश्वकपमा भन्दा यो बढी हो । तर एउटा अर्को तथ्य पनि के रहेको छ भने यस विश्वकपमा फास्ट बलरहरू कम गतिको बल फाल्ने कोशिस बढी गर्दैछन् ।
ट्याग्स: #CWC, #cwc2019, ICC world cup records